शिक्षा - Arun Khabar
विराटनगर, २१ जेठ । विराटनगरको पुष्पलाल चोकमा विद्यार्थी केन्द्रित ट्राफिक सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई तीव्र पारिएको छ । ट्राफिक प्रहरी पोस्ट पुष्पलाल चोकले विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर विभिन्न विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । सम्बन्धित विद्यालयमै पुगेर प्रत्येक साताको शुक्रबार र मङ्गलबार विद्यार्थीलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिने गरिएको ट्राफिक प्रहरीका सहायक निरीक्षक किशोर निरौलाले जानकारी दिनु भयो । उहाँका […]
मेरिल्याण्ड कलेजका अध्यक्ष ढुंङगेल सम्मानित
विराटनगर, २१ जेठ । विराटनगरस्थित मेरील्याण्ड कलेजका संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रध्यापक गुणराज ढंङगेल सम्मानित हुनु भएको छ । विराटनगरमा भएको उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) मोरङको छैंटौ जिल्ला अधिवेशनमा ढुंङगेल सम्मानित हुनु भएको हो । शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै प्राध्यापक ढुंङगेललाई सम्मान गरिएको हिसान मोरङका निर्वतमान अध्यक्ष राजेश कार्कीले जानकारी […]
हिसान मोरङको अध्यक्षमा अमित ढकाल
विराटनगर, २१ जेठ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) मोरङको अध्यक्षमा अमित ढकाल निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको छ । विराटनगरमा गएराती सम्पन्न भएको छैटौ जिल्ला अधिवेशनबाट ढकाल अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको हो । ढकाल यसअघि हिसान मोरङको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । हिसान मोरङको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा टि.एन. तिम्सिना, उपाध्यक्ष मोहनकुमार श्रेष्ठ, डा. […]
विराटनगर, १४ जेठ । विराटनगर महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुखसहितका जनप्रतिनिधिलाई सरोकारवालाहरुले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेझै शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् । विराटनगर– ११ स्थित जनपथ माविले आयोजना गरेको शैक्षिक उनन्नयनमा स्थानीय निकायको भूमिका विषयक अन्तरक्रियाका सहभागिहरुले यस्तो बताएकबा हुन् । जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाईका प्रमुख टंक गौतमले स्थानीय तहका अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्दै शिक्षा […]